आमा छोरी भन्दै जव सिमानामा पुगेका यी युवती सोधपुछ पछि पक्राउ परे ! « Etajakhabar
आमा छोरी भन्दै जव सिमानामा पुगेका यी युवती सोधपुछ पछि पक्राउ परे !
प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७६, मंगलवार १८:४७
निरा गौतम – रुपन्देही, करीब एक महिना अघि खोकीको औ षधि किन्ने बहाना बनाउँदै एक महिला नेपाल– भारत सीमानाका बेलहिया आइपुगिन् । शङ्का लागेर माइती नेपालका कर्मचारीले उनलाई रोके । सोधपूछ गर्दै जाँदा उनी इलामबाट रोजगारीका लागि विदेश जाँदै गरेकी महिला रहेको पत्ता लाग्यो । उनलाई दलालले भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाएर दिल्ली जाने बसमा सम्पर्क गरी पठाएका रहेछन् ।
सीमानाकामा प्रहरी तथा सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीले सोधपूछ गरे खोकीको औ षधि किन्न सुनौली जान लागेको भनी झुटो बोल्न दलालले सिकाए अनुसार आफू रुपन्देहीमै बस्ने र सुनौलीमा औ षधि सस्तोमा पाइने भएकाले किन्न जान लागेको बताइन् । माइती नेपालका कर्मचारीले उनलाई धेरैबेर लगाएर सोधपूछ गरेपछि आफ्नो इलाम घर भएको र रोजगारीका लागि विदेश जान लागेको भेद खुलाइन् । पछि उनलाई माइती नेपालले परिवारको जिम्मा लगायो ।
पछि सोधपूछ गर्दै जाँदा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका दुई महिलाले धेरै धन कमाउने प्रलोभन देखाई कक्षा ८ पढ्ने र अर्की एसइई दिएर बसेकीे किशोरीलाई भारत लैजान लागेको थाहा भयो । भारतमा झारफुक गरे प्रशस्त पैसा झर्छ भनी ललाइफकाई लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेपछि उनीहरु बेचिनबाट बचे । बेचबिखनका लागि लैजाने दुई महिला अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूविरूद्ध सार्वजनिक अ पराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलिरहेको छ ।
गत कात्तिक १५ गते भारतको मुम्बईबाट २२ वर्षीया महिलालाई दुई वर्षीया छोरीसँगै उद्धार गरियो । चितवनको भरतपुर घर भएकी तिनले विगत तीन वर्षदेखि मुम्बईमा दे ह व्यापारमा गर्दैआएकी थिइन् । भारतीयसँग विवाह गरेकी उनलाई ज’ब’र्ज’स्ती श्रीमान्ले दे’हव्या’पारमा लगाएका थिए । विभिन्न सङ्घसंस्था र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा माइती नेपालको सम्पर्कमा आएपछि सोधपूछ गर्दा आफ्नै श्रीमान्ले भारत लगेर दे\_ह व्या\_पारका लागि बा ध्य बनाएको तथ्य खुल्यो ।
छोटो समयमै प्रशस्त धन कमाउने प्रलोभनमा फस्दा विभिन्न जिल्लाका महिला तथा किशोरीहरु भारतमा बेचिन पुगेका छन्, यो क्रम रोक्न सकिएको छैन । माइती नेपालका संयोजक माया क्षेत्री भन्नुहुन्छ – “रोजगारीमा जाने महिलालाई दलालले लिएर आउँदैनन् । होटलमा सम्पर्क गर्छन् । काठमाडौँ बोलाउँछन् । एक–ढेड महिना कोठामा राख्छन् । अब नेपालको बाटो जान पाइएन भारतबाट जानुपर्छ भनेर भारतमा लगेर बेच्छन् ।” उहाँले खुल्ला सिमानाका कारण नेपालका महिलाहरु सजिलै भारत पुग्ने गरेको बताउनुभयो । माइती नेपाल भैरहवाको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सीमा क्षेत्रबाट ८१ जना र भारतका विभिन्न स्थानबाट सात जनाको उद्धार गरिएको छ ।
मूलतः यौ न बजार, बाध्यकारी कृषि श्रम, घरेलु कामदार तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक लैजानका लागि महिला बेचबिखन हुने गरेको प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । “ग्रामीण भेगका सामान्य लेखपढ गरेका महिलाहरु दुःख नगरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रलोभनमा फस्छन् र बेचबिखनमा पर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
ह तियारपछि मानव त स्करी नै विश्वको सबैभन्दा बढी नाफामूलक ब्यवसायको रुपमा रहेको छ । मानव बेचबिखन व्यक्तिविरुद्ध हुने एक अ पराध मात्र नभई यो मानव अधिकार र मानव मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग म्भीर हनन पनि हो । मानव बेचबिखनको सवाललाई राज्यको दायित्वसहित मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिनु पदर्छ भन्नुहुन्छ, मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं ५ का उपनिर्देशक पवन भट्ट ।
उहाँले भन्नुभयो – “फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरु सङ्घीय र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेको भए पनि यस विषयमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम तथा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किटिएको छैन । त्यसो भएर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले यस विषयमा कार्य गर्न सकेका छैनन् ।” स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्ने कार्य गर्न वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यद्यपि त्यसअनुरुप स्थानीय तहका सरकारहरुले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको पाइँदैन ।
रुपन्देहीमा माइती नेपाल सहित साना हात, थ्री एन्जल्स, एबिसी नेपाल, आफन्त नेपाल र शुभ अवसर ग्रामले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी मध्ये चार वटा संस्थाले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र बेलहियामा निगरानी गरिआएका छन् । रुपन्देहीमा बेलहियासहित कक्रहवा, भगवानपुरलगायत दर्जनौं सीमानाका छन् । सबै संस्थाहरुले एकै ठाउँमा बसेर निगरानी गर्दा मानव त स्करहरुले अन्य नाका प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालभित्रै हुने मानव बेचबिखन नीतिगत र नियामक निकायको दृष्टिमा पर्न नसक्दा हजारौं महिला तथा बालबालिका नेपालभित्रै भइरहेको मानव बेचबिखनको शि कार भइरहेका छन् । यो धन्दाका हाँगाहरु डान्सबार, दोहोरी, डिस्कोसम्म फैलिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक ग म्भीर अ पराधको रुपमा पहिचान गर्दै यस विरुद्धका प्रावधानहरुलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएका छन् । यद्यपि विद्यमान ऐनले मानव बेचबिखनका समग्र सवालहरुलाई अधिकारमुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।